မနေ့က ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ကို သွားဖြစ်တယ်။ ဆရာမက အဲဒီမှာ ပွတ်ရ်ှကင်ရဲ့ ကဗျာမှာ အသုံးများတဲ့ စကားလုံးတွေ ချည်းပဲ ရေးထားတဲ့ အဘိဓာန်ရှိတယ်တဲ့။ သွားရှာကြည့်ဆိုတာနဲ့ သွားဖြစ်တာ။ ဟိုရောက်တော့ အဲဒီအဘိဓာန်တော့ မတွေ့ဘူး ပွတ်ရ်ှကင်ရဲ့ ကဗျာစာအုပ်ပဲတွေ့တယ်။ (ကဗျာဆိုတာထက် လင်္ကာလို့ပြောရင် ပိုမှန်မလားတော့ မသိဘူး။) လင်္ကာသွားနဲ့ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုဆိုရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ဆီက ဦးပုညရဲ့ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းဝတ္ထုတို့၊ ရေသည်ပြဇာတ်တို့လို လင်္ကာသွားနဲ့ရေးထားတာ။ ယုန်ထောင်ကြောင်မိဆိုပေမယ့် မိတဲ့ကြောင်ကလည်း ကြီးတယ်လေ..ဟီး။ ပုံမှန်အရဆိုရင် ကျောင်းစာကြည့်တိုက်က အဲဒီစာအုပ်မျိုးတွေ ထားခဲတယ်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေလောက်ပဲ ထားတာ။ ဒီတစ်အုပ်ကတော့ ဘယ်လိုရောက်နေလည်း မသိဘူး။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ဆိုပေမယ့် အမှန်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ အဆောင်ရဲ့ စာကြည့်တိုက်ပါလေ။ အဲဒါကြောင့်လည်း သေးသေးလေးဖြစ်နေတာ။ ကျောင်းရဲ့ မူရင်းစာကြည့်တိုက်ကြီး ရှိသေးတယ်။ သူကတော့ ပိုစုံတာပေါ့။ နောက်ကျရင်တော့ ဆရာမကို မြို့ထဲက "တက္ကသိုလ်များစာကြည့်တိုက်"ကို လိုက်ပို့ခိုင်းရမယ်။ ဆရာမကတော့ ပြောနေတာကြာပြီ။ ကျွန်တော်က ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်သိလို့ ( အဲလောက်မှ မကောင်းသေးတာ ဘာသာစကားက) မပို့ခိုင်းတာ. J
ထားပါတော့လေ။ ဘာတွေလေကြောရှည်နေမိတယ် မသိဘူး။ အဓိက က အဲဒီထဲက ပွတ်ရ်ှကင်ရဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပိုင်းတင်မလို့။ ကဲမရှည်တော့ဘူးဗျာ။
ငါက ဘာအတွက်နဲ့မှ မင်းကို စိတ်ဆင်းရဲစေချင်ခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲကွယ်….။
မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာနဲ့ တိတ်တဆိတ် ချစ်ခဲ့တာပါ…
မ၀ံ့ရဲတဲ့စိတ်နဲ့ သ၀န်တိုစိတ်တွေက လောင်မြှိုက်စေတယ်
ငါကတော့မင့်ကို နူးညံ့ရိုးသားစွာ ချစ်ခဲ့တာပါ
ဘုရားသခင်အလိုကျ မင်းအချစ်ဆုံးကတော့ တခြားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒဏ်ရာတစ်ချို့ကို သတိရမိလို့ပါ။ ရသမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုပါ။ အမှားရှိရင်လည်းထောက်ပြကြပါ။ ရက်ရက်စက်စက်
ဝေဖန်တာကို ထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးလို့ မှတ်ပါ့မယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့် ရုရှားစကားအဆင့်အတန်းက မူလတန်းသာသာပဲရှိပါတယ်။ အများကြီးလိုပါသေးတယ်။ ခုဟာက ဖတ်မိရင်း ဒဏ်ရာဟောင်းလေးတွေ ပေါ်လာလို့ တင်ဖြစ်သွားတာပါ။
Posted by wai linn at 3:16 PM
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဘာသာပြန်တာထက် ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးတွေနှင့်အတွေးတွေက စာဖတ်သူကို ပိုဆွဲဆောင်စေပါတယ်။
12/01/2009 6:42 AM
အချိန်မရတဲ့ကြားက ကဗျာလေး တွေ့တော့လည်း
ကဗျာသမား မို့ ဖတ်ဖြစ်သွားပါတယ် ။
ဘာသာပြန်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုဝေလင်းရေ ...
ဘာသာပြန်တဲ့ ခံစားချက် ၊ အယူအဆ ကလည်း ကောင်းပ ဗျာ ... :)
[url=http://www.pi7.ru/zdorove/1709-dvuhletniy-malchik-brosil-kurit.html ]Позитивные мысли, добрые поступки, любовь - все это просто необходимо человеку [/url]
9/12/2010 3:19 PM
В общем,познакомилась с арнем чуть более месяца назад-влюбилась очень сильно,мы начали встречаться))Сначала смсились просто непрерывно, созванивались,виделись ежедневно(ну или же буквально каждый,хотя живём в 30 км друг от друга,оба работает полны рабочий день), из-за этого и я,и он жутко невысыпалась и уставали,но жутко тянуло друг к другу. А в данный момент как-то общение свелось к 2-3 смскам в день и встречам2раза в неделю, что меня очень сильно огорчает и напрягает((И внимания как-то меньше...Когда видимся-всё замечательно:и горячие поцелуи и объятия,и много тем для диалога,но как-то и этого стало как-то поменьше,и само общение стало гораздо реже и формальнее что, хотя он предлагает видеться,говорит,что скучает и т.д. Завтра собираемся увидеться,я хочу заявить,как есть-что меня сейчас такое общение не особо устраивает.Но вот как начать этот диалог и с каких фраз?Думаю,начать что-то вроде,ну у тебя,наверное,какие-то дела на работе,раз реже стали общаться или же как лучше?Инициативу как-то не особо хочется проявлять,но всё-таки как деликатно донести до него,что меня похожие отношения не устраивают?Думала сначала начать его игнорировать, потом подумала,что всё ещё более заглохнет и сойдёт на нет,решила поговорить....